UPDATE: Hoggaanka sare Al-Shabaab oo si adag uga hadlay muranka Kenya ay gelisay badda Soomaaliya. | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Hoggaanka sare Al-Shabaab oo si adag uga hadlay muranka Kenya ay...
UPDATE: Hoggaanka sare Al-Shabaab oo si adag uga hadlay muranka Kenya ay gelisay badda Soomaaliya.
Muqdisho (Halqaran.com) – Amiirka maleeshiyaadka Ururka Al-Shabaab, Axmed Cumar Abuu Cubeyda ayaa markii ugu horeysay ka hadlay murunka ay Dowladda Kenya gelisay Badda Soomaaliya.
Abuu Cubeyda oo farriin cod ahayd soo diray ayaa arrimo kala duwan kaga hadlay, isagoona ku soo hadalqaaday murunka badda, ee xilligan u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya, kiis la xiriirana uu ka furan yahay Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga.
Amiirka ayaa shacabka Soomaaliyeed ku wargeliyay in Ururka Al Shabaab ka soo horjeedo go’aan kasta, oo Maxkamadda Cadaaladda Caalamiga ay ka soo saarto murunka ay Kenya ka keentay Badda Somaliya.
“Waxaan Umadeena Muslimka ah ku wargelineynaa in Mujaahidiintu ka soo horjeedaan gaashaankana u daruurayaan go’aan kasta oo ka soo baxa maxkamad ku sheega caalamiga ah ee ku saabsan loolanka badda Soomaaliya ka taagan.Waxaan caalamka u sheegeynaa in badaheenu ahayn kuwa gorgortan aan ka galeyno, martina ugama noqoneyno dowlado Shisheeye.” Ayuu yiri Amiirka Ururka Al-Shabaab.
Abuu Cubeyda ayaa shacabka Soomaaliyeed dib u xusuusiyay in Kenya ay horey u qaadatay dhul baaxad weyn, ka hor inta aanu iminka damaca ka soo gelin badda dhirirsan ee Soomaalidu uu Alle ku maneystay.
”Waxaa laga rabaa Umadeena Muslimka ah inay ku baraarugto in Kenya ay soo liqday dhul baaxad weyn, ka hor inta aysan badda u hanqal taagin, Itoobiyana waa tan hadda loo saxiixay Dakado dhowr ah, dalkuna wuxuu ku socdaa in la wada xaraasho haddii aydaan ka hortagin.” Ayuu yiri Abuu Cubeyda.
Hadalka ka soo yeeray Hoggaanka Uruka Al-Shabaab ayaa ku soo aadaya, xilli Dowladda Soomaaliya ay ka biyo diiday in ay gorgortan ka gasho murunka ay Kenya ku furtay Badda Soomaaliya.
Hoggaanka sare Al-Shabaab
muranka kenya ay gelisay badda Soomaaliya
axmed September 20, 2019 At 20:53
Isagaa ka xun kenya iyo sheydaanoo dhan, argagixiso. cidna ha taageerin.